Wamkelekile ukuba Yethu ukugcina!
Kumho izihlangu zokhuseleko zokwakha Welt
iibhutsi imvula PVC
Yintoni indima kuphela kabini izihlangu yabasebenzi?
Xa kudityaniswe izixhobo yezihlangu kuphela ngoku, ndayomisa ngeentende kabini iye isisombululo kakhulu lula engcono. Ukhuseleko onyawo kuyafikelelwa yi banxibe bokuxhathisa kwaye anti-slip komsebenzi outsole, nto leyo iqaphelwa ekukhanyeni athambileyo iimpawu midsole. Intuthuzelo xa ehamba.
Ukusuka lo mbono, eyona indibaniselwano yangoku UR / DB, esebenzisa irabha (UR) ukwenza outsole, lyu (DB) njengoko midsole, uze emva koko ngokusebenzisa iglu okanye imichiza nisondelelane umsebenzi kunye umsebenzi lib DB ngokwayo iibhondi i outsole ukuya midsole. Kakade ke, ndayomisa ngeentende kumphandle isihlangu kwakhona likhazimliswe, olubengezelayo, kwaye eqingqiweyo.
Kukho kwakhona indibanisela eziphathekayo kuphela, ezizezi DB / AKA (lyu / lyu thermoplastic). Kuyinto ukhululekile ukuba ukunxiba. Ngaphezu koko, ukusetyenziswa lyu thermoplastic ukwenza outsole idibana neemfuno abayili wanamhla, kuba nakuphumla intende eyenziwe AKA inokuvelisa kuphela enemibala, kwaye inkqubo nangokukrola kwi yintende nako zinokohluka.
Enye kuphela kabini-umaleko eyenziwe DB / DB (lyu / lyu) izinto ngaxeshanye, outsole kunye midsole enziwe lyu. Kuba outsole, kukho izinto lyu ingakumbi ashinyeneyo kufuneka isetyenziswe ukulondoloza iimpawu banxibe kweelana le outsole. Kuba midsole, lyu foamed kufuneka sikhetwe intuthuzelo.
ixesha Post: Dec-24-2018
-Mfono Imfono mfono: 86-536-2598582
NO.7555 of Xingyuan street, Zhanglu, Gaomi mzi,
Weifang mzi, kwiphondo Shandong, China